Ugu yaraan 18 qof oo ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 18 qof oo ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho
June 30, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Gaariga baska ah ee qaraxa ku dhacay, deegaanka Lafoole.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Miinada dhulka lagu aaso ayaa ugu yaraan 18 qof oo shacab ah ku dishay deegaanka Lafoole oo u dhow caasimada Soomaaliya, Muqdisho, sida ay sheegeen booliska.
“Dhamaan 18 qof oo gaari bas ah saarnaa ayaa dhintay waana ay gubteen. Miinada gacanta laga hago ayaa ku qaraxday oo lagu aasay wadada dhinaceeda,” Cabduqaadir Maxamed oo ah sarkaal booliis oo goobta ku sugnaa ayaa sidaa u sheegay Reuters.
Dhibaatada shacabka soo gaartay ayaa dhacday gelinkii hore maanta oo Khamiis ah, markii gaariga uu qaraxa la kacay, sida ay booliska sheegeen.
Sida warbaahinta maxaliga ah ku warantay, aabe iyo labo caruur ah oo uu dhalay ayaa ku jira dadka geeriyootay.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarka, balse maleeshiyada ku xiran al-Qaacida ee al-Shabaab taasoo la dagaalamaysa dowlada uu caalamka aqoonsanyahay Soomaaliya ayaa si joogto ah weeraro ugu qaada saraakiisha dowlada iyo shacabka.
July 2, 2016 Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay weerar madfac Baydhabo
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo dib u magacaabay guddiga doorashada heer federal
Garoowe-(Puntland Mirror) Siyaasi Cabdi Xaaji Yuusf “Shuluco” ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay shalay galab oo Khamiis ahayd duleedka magaalada Garoowe, sida ay warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyeen dhaqaatiirta caafimaadka isbitaalka guud ee [...]
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo yeelanaya shir ku saabsan Soomaaliya
New York-(Puntland Mirror) Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Talaado ah ka doodi doona qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo-wareedyo diblomaasi, kadib markii qaar katirsan Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka iyo hoggaamiyaasha [...]